Maraykanka oo dacwad ku soo oogay burcad internet oo Shiinays ah - Wargane News
Home World News in Somali Maraykanka oo dacwad ku soo oogay burcad internet oo Shiinays ah
Saddex ruux oo Shiinays ah ayaa dacwad lagu soo oogay iyaga oo ku eedaysan in ay dhac dhanka macluumaadka ah u gaysteen shirkado caalami ah.
Saddexdan ruux ayaa la sheegay in ay ka shaqeeyaan shirkad ammaanka internetka ka shaqaysa oo Shiinaha ku taalla, waxaana la sheegay in ay bartilmaameedsadeen shirkadaha Moody’s Analytics, Siemens iyo Trimble, sida ay sheegayaan eedaymaha loo soo jeediyay.
Waxaa lagu eedeeyay in ay adeegsadeen email lagu soo laray waxyaabo kombiyuutarada loogu dhaco iyo xeelado kale si ay u dhacaan macluumaadka ganacsiga ee sirta ah.
Saddexdan ruux xabsi kuma jiraan, mana cadda in ay wali Shiinaha jiraan iyo in kale.
Eedaymaha faderaalka ayaa ka furmay Pittsburgh, Pennsylvania, waxaana lagu sheegay magacyadooda Yingzhuo, Dong Hao iyo Xia Lei waxaa kale oo la sheegay in leeyihiin shirkad ammaanka internetka ka shaqaysa oo ku taalla magaalada Guangzhou oo dhacda koonfurta Shiinaha.
Waxaa lagu eedeeyay in intii u dhaxaysay 2011 ilaa sannadkan ay qaadeen weerarro dhanka internetka ah oo “abaabulan, sharcidarrana ah” iyaga oo jabsaday emaillo, ganacsiyo, macluumaad ganacsi, iyo xoggo muhiim ah oo shaqaalaha la xiriira.
Dacwad ooge Soo C Song ayaa sheegtay in waraaqda xiritaanka loo jaray saddexdaas ruux, waxayna sheegtay in aysan jirin wax tilmaamaya in qorshahani uu ahaa wax ay dawladdu wadatay.
Shirkadda Shiinaha laga leeyahay wali kama aysan hadlin arrintan.
Dacwad oogeyaashu waxay sheegeen in dacwadan la soo gudbiyay bishii Sabtembar dawladda Shiinuhuna ay ogtahay.
Somalia: 30 Al-Shebab killed in two clashes in Somalia, say officials
Somaliland: Esipisu ‘needs refresher courses’ in foreign affairs, says Munya